Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Jaaliyada Ogaadeeniya ee Kenya oo ka furmay Nairobi ayay gabdhihii shirka yimid dahabkooda ugu deeqeen qaxootiga
Shirkii Jaaliyada Ogaadeeniya ee Kenya oo ka furmay Nairobi ayay gabdhihii shirka yimid dahabkooda ugu deeqeen qaxootiga
Posted by ONA Admin	/ January 1, 2012
Waxaa Magaalad Nairobi si habsami leh ooga furmay shirkii jaaliyada Ogaadeeniya ee dalka Kenya. Shirkaa oo lagu soo gunaanadayay shirar ay jaaliyado waday oo ku saleysanaa abaabul iyo kor u qaadid tayada xubnaha Jaaliyada Ogaadeenya ee dalka Kenya. Shirka oo dhamaan xubnaha jaaliyadu ay goob joog ahaayeen ayaa waxaa furey Gudoomiyaha Jaaliyada Mudane Cabdinaasir uurdoox oo ka warbixiyey dib u dhis ay ku sameeyeen xubnaha jaaliyada iyo abaabul mudo dheer socday oo ay jaaliyadu ku guuleysatay iyadoo hawlahaas sidii loogu talo galay ay u fushay. Wuxuu Cabdinaasir sheegay in guulaha ay jaaliyadda ka gaadhay dhanka abaabulka ay sabab u ahayed ka feejignaan laga feejiganyahay dhaxgalka uu cadawgu isku dayo in uu xubnaha ku soo dhex galo.
Sidoo kale mas’uuliyiinta Jaaliyada shirka kala soo qayeb galay waxaa ka mid ahaa mudane M. Shariif oo xubnaha jaaliyada warbixin ka siiyay hadal haynta wadahadalka la sheegay in uu dhexmarey mas’uuliyiinta jabhada iyo wafdi ka socday dawladda Kenya, wuxuuna mudane Maxamed Shariif xubnaha xusuusiyey taariikhda halganka gobanimodoonka ah iyo go’aanka ONLF oo uu yidhi; “go’aanka wada hadal in lala galo dawladda Itobiya waxaa sal u ah labo arimood in la helo cid dhexdhexaad ah iyo goob nabad galiyo ah oo cid walba ay xor u tahay afkaarteeda iyo qodobada ay goobtaas la imaaneyso”
Mudanaha oo sii wata hadalkiisa ayaa yidhi; “Mas’uuliyiinta jabhadu go’aankoodu ma aha mid ay iska qaadanayaan ee waa mid ka tarjumaya rabitaanka Shacabka Soomaalida Ogaadeeniya.”
Waxaa kale oo uu Maxamed Shariif ku baraarujiyay mas’uuliyiinta jaaliyadaha iyo dhamaan xubnuhuba in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa cadawga gaar haan kuwa sida gaarka ah looga soo dirayo Ogaadeeniya, kuwaa oo Wayaanuhu oogu talogalay inay ka dhex shaqeeyaan Jaaliyadaha Ogaadeniya ee dibdaha jooga iyadoo in badan oo kamid ah aan hadaba hayno xogtooda iyo meelaha ay kala joogaan iyo qorshe ahaan wixii la soo siiyey in ay ka hawlgalaan. Waxaa kaloo uu kula dardaarmay in guud ahaan la xoojiyo hawlaha Jaaliyada u yaaala iyadoo buu yidhi jaaliyada Kenya go’aamadii ay qaadatay dhamaadkii sanadka ay ahaayeen go’aamo wax tar u leh hawlaah mustaqabalka jaaliyada horyaal.
Shirka maanta ay jaaliyadu lahayed ayaa lagu Ogaysiiyey xubnaha in uu jiro barnaamij loogu magac darey ( Gurmad ) oo loogu talo galay in caawimaad loogu ururiyo qoxootiga Ogaadeeniya ee soo galay xeryaha qoxootiga Dhadhab Kenya oo ay dhibaato iyo diif ka soo gaadhay Safaro dhaadheer oo ay soo mareen iyo waliba iyaga oo qoxootiga yimid xili ay jiraan shaqo joojin ay sameeyeen shaqaalaha UN ta ee Dhadhaab taasina ay sababtay in ay waayaan wax yaabihii aasaasiga u ahaa marka ay dad qoxooti ah soo gaadhaan meeshi ay ku socodeen.
Markii lagu dhawaaqay Barnaamjikaas oo uu hormuud ka yahay N/hure Xaliye oo ah halgamaa ay dadka Ogaadeeniya aad u jecelyihiin ayaa waxaa bilaabatay in gabadhii joogay kulanka ay oogu deeqaan dadkaas lacago iyo waliba dahabkooda, waxaana ka mid ahaa gabdhaha dahabkooda oogu deeqay dhibanayaasha Qoxootiga Ogaadeeniya Canbe Rashiid, Faadumo Xirsi Mahad, Sahra Ismaaciil iyo Fardwso Axmed Murar. Iyadoo gabdhaha inta kalane ay bilaabeen bixinta lacag iyo balanqaadyo ay u sameeyeen barnaamijka Gurmad ee ololihiisa maanta la bilaabay, iyadoo ay socon doonto deeqda iyo yabooha. Waxaa la ogyahay in gabadha Soomaalida Ogaadeeniya ay hurmuud ka yihiin halganka Ogaadeeniya dibada iyo gudahaba.
Gabogabadii shirka ayaa waxaa ka hadlay xubno marti sharafa ahaa oo ka yimid wadamada dibada oo dardaarano kala duwan u jeediyey xubnaha jaaliyada Ogaadeeniya ee Kenya, iyagoo ugu baaqay jaaliyadaha S.Ogadenya ee dunida dacaladeeda ka hawlgala inay walaalahooda ka soo cararay dhibaatada gumaysiga ee xeryaha qaxootiga soo galay inay u soo fidiyaan taageero.